သူ..နှင့်..ကျွန်မ..အဖြစ်မှန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သူ..နှင့်..ကျွန်မ..အဖြစ်မှန်
Posted by candle . on Aug 18, 2012 in Copy/Paste, News | 18 comments
ရိုးသားသော မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများ အလွယ်တကူအညာမမိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဤပို့ စ်ကိုတင်ပါသည်။ ယခင်တင်ဖူးပြီးသားရှိ ခဲ့ပါကတိုက်ဆိုင်မှူကြောင့်တူညီနေခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်မ အင်တာနက်ကျွမ်းကျွင်စွာမသုံးတတ်ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏်ဖော်ဝဒ်မေးလ်ထဲမှတဆင့်Zorpia ဟူသောဝဒ်ဆိုက်ထဲတွင်မန်ဘာဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ Anderson Kelvin Smith အသက် ( 52 )( မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ဆိုသူနှင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ Skype video call မှသူ့ ကိုမြင်ရသဖြင့် တင်ထားပုံနှင့်လူမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ ကံကောင်းသည်မှာကျွန်မကွန်ပျူတာတွင်ကင်မရာတပ်မထားခြင်းကြောင့်ကျွန်မတင်ထားသောဓာတ်ပုံသာသူမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မတို့ အချိန်တိုအတွင်းအတော်များများချက်ကြရာမှအတန်အသင့်ရင်းနှီးမူရခဲ့ကြသည်ဟုပြောရပါမည်။ သူသည်အရှေ့တိုင်းနိူင်ငံများအားအလွန်စိတ်ဝင်စား၍ အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ၊ အလည်အပတ်လာရောက်ချင်ကြောင်း သို့ သော်သူ့့့့တွင်အသိအကျွမ်းမရှိသောကြောင့်မလွယ်ကူခဲ့ကြောင်း၊ ယခု သူငယ်ချင်းရပြီဖြစ်သောကြောင့်အခွင့်အလမ်းရပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်မထံသို့တစ်နေ့ လျှင်သုံးကြိမ်ခန့် မက်ဆေ့ ခ်ျပို့ ၍နှစ်ကြိမ်ခန့် ဖုန်းဆက်ပြီး သူကျွန်မကို မည်မျှထိတန်ဖိုးထားခင်မင်မိကြောင်းများပြောပါသည်။ +44 နှင့်စသောဖုန်းနံပါတ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ် UK မှဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့ နှင့်ခင်မင်၍ငါးရက်ခန့် ကြာသောအခါသု့ လေယဉ်လက်မှတ်ကွန်ဖန်းဖြစ်၍ ခရီးသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊သွားမည့်နေရာမှာ Venezuela South America သို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ယခုရက်အနည်းငယ်အတွင်းပင်လယ်ပြင်တွင်တာဝန်နှင့်အလုပ်များနေမည်ဖြစ်ကြောင်း သူခရီးမသွားမီခင်မင်မှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လက်ဆောင်ပို့ ပေးလိုက်ကြောင်းပြောပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများ၏လုပ်အားခလစာမှာအမှန်တကယ်နည်းပါးသည်ကိုသူသိသောကြောင့်ဤမျှပို့ ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်။ သို့ သော်သူပို့ ပေးသောလက်ဆောင်စာရင်းကိုကြည့်မိသည်နှင့်သူ့ အပေါ်ကျွန်မ၏သံသယ စတင်ပါတော့သည်။ သူပို့ သည့်စာရင်းမှာ..
1) စတီးလ် BOX ငယ်တစ်လုံး(အတွင်း၌ပိုက်ဆံ ပေါင် 5500 )
2) ခင်မင်မူအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စိန်လက်စွပ် တစ်ကွင်း
4) Sam sung galaxy s5ဟန်းဆက်တစ်လုံး
5) hp laptop တစ်လုံး
6) အမျိုးသမီးသုံး ရေမွှေး
7) အမျိုးသမီးသုံး လက်ကိုင်အိတ် rest item တစ်လုံး ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မဆီသို့ နှစ်ရက်သုံးရက်ခန့် ကြာလျှင်ပါဆယ်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြော၍ Air way bill ပါဖော်ဝဒ်လုပ်ပေးပါသည်။ Package services မှာ
Excel Cargo Courier Services World Wide PLC United Kingdom and Asia South East Malaysia branch e:mail :excel service @ London.com
Accra Ghana East Africa branch e:mail excel servic @ london.com BLK 25 lot7HBangunan Kela Gelugar Janlan Sultan Azlan Shan Trasacco Vally , Opposite Trasacco Valley Estate Accra Ghana e:mail excel. service @ london.com or excel.service @gmail.London
England phone number +44 7858836903
Malaysai phone number +60163974358
Ghana phone number +233248645122 ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ တွင် 007 ကုတ်နံပါတ်ဖြင့်ဖုန်းဝင်လာပါသည်။ ကျွန်မ၏ပါဆယ်မှာ မလေးရှားသို့ ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ ထံ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါရန်ပြောပါသည်။ ထို့ အပြင် passage servies fee အဖြစ် $ 700 ကို West Union Bank သို့ ပေးသွင်းရန်နှင့်လက်ခံမည့်သူမှာ မလေးရှား EXCEL CARGO SERVICE မှအကောင့်မန်နေဂျာCHRIS NA NA AKWASI ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းများကိုမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်တစ်မျိုး 007 ကုတ် ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့်တစ်ဖုံအကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်လာပါသည်။ ဤတွင်ကျွန်မ၏သံသယမှာပိုမိုခိုင်မာလာပါတော့သည်။ ထိုနေ့ တစ်နေ့ လုံးကျွန်မ၏တုံ့ ပြန်မှူ မရသောအခါနောက်တစ်နေ့ မနက်တွင်ကျွန်မ သူငယ်ချင်းထံမှဖုန်းဝင်လာပါသည်။ သူ့ ထံသို့EXCEL CARGO SERVICE မှဖုန်းဝင်လာကြောင်းပါဆယ်မှာ ငွေ မပေးသွင်းသောကြောင့်လမ်းခရီးတွင်ကြန့် ကြာနေကြောင်းသူပို့ လိုက်သည့်တန်ဖိုးမှာ များလွန်းသောကြောင့်ပါဆယ်အတွက်သူအရမ်းစိတ်ပူနေမိကြောင်းထို့ ကြောင့်ငွေကိုအမြန်ဆုံးပေးသွင်း၍ပါဆယ်ထုတ်ယူရန်အကြောင်းများပြောလာပါသည်။
သူမည်မျှအောက်တန်းကျကျဆက်၍လိမ်နိုင်မည်ကိုကျွန်မသိချင်ပါသေးသည်။ထို့ ကြောင့် $700 ဆိုသည်မှာကျွန်မအတွက်တစ်လ လုံးစာလုပ်အားခဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမျှများပြားသောငွေ အမှန်တကယ်လက်ထဲတွင်မရှိကြောင်းပြောလိုက်ပါသည်။ထိုအခါ သူသည်ယခုပင်လယ်ပြင်တွင်အလုပ်နှင့်ရောက်နေကြောင်း ထိုငွေကိုသူသွင်းပေးချင်သော်လည်း ယခု မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သူ့ သမီးထံသို့ ဆက်သွယ်သောအခါ ထိုမိန်းကလေးလက်ထဲတွင် $ 200 သာရှိသောကြောင့်ကျွန်မအတွက်ထိုငွေ$ 200 ကိုပေးသွင်းခိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ကျန်သည့် $ 500 ကိုကျွန်မဘာသာ အခြားသူတစ်ယောက်ထံတွင်ခဏလှည့်၍ပေးသွင်းလိုက်ရန်နှင့်ပါဆယ်ရောက်လာပါကပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောလာပါသည်။
ကျွန်မ အတိအကျသိလိုက်ရသည်မှာ ကျွန်မ၏သူငယ်ချင်းသည်အွန်လိုင်း ပေါ်တွင်ဖြစ်သော်လည်း ညစ်ညမ်းသောစကားလုံးများလုံးဝမသုံးခဲ့ပါ။သူသည်ကျွန်မအတွက်လူယုတ်မာတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း အကွက်ကျကျ လိမ်နိုင်သည့်လူလိမ်တစ်ယောက်သာဖြစ်ပါသည်။လူကြီးလူကောင်းရုပ်သွင်နှင့်ခန့် ညားလှသည့်ထိုကဲ့သို့ လူလိမ်သူငယ်ချင်းများလည်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှိပါသည်။ထိုနေ့ မှစ၍သူ၏ဖုန်းများကိုလုံးဝလက်မခံတော့သလိုမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလည်းမည်သို့ မျှ မတုံ့ ပြန်တော့ပါ။ရက်အနည်းငယ်ကြာသောအခါသူလည်းမောသွားသည်မသိပါ။ ထပ်မံဆက်သွယ်မလာတော့သလိုကျွန်မနှင့်သူ၏အွန်လိုင်းခင်မင်မူမှာလည်းအဆုံးသတ်သွားပါတော့သည်။
မှတ်ချက် ။ ။ သူသည်ကျွန်မအား WEST UNION BANK ကိုအသုံးပြုခိုင်းခြင်းမှာလက်ရှိကျွန်မသည်အရှေ့နိုင်ငံတစ်ခုတွင်အလုပ် လုပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ဤအဖြစ်အပျက်အပြီးထပ်မံသိရှိရသည်မှာကျွန်မ၏သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှာလည်း lucky draw ကဲ့သို့ သောအလားတူလိမ်လည်မူကြောင့် $ 2000 ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးကြောင်းနာကျင်စွာ သိ ရှိလိုက်ရပါသည်။
ခုလိုအကွက်ကျကျ လိမ်လည်မှု့မျိုးရှိနေတာသိရတဲ့အတွက် candle ရေ…
အင်း အွန်လိုင်း အွန်းလိုင်း ပါလားနော်။
လက်တွေ့ ရှင့်…လက်တွေ့ ..
တော်သေးတယ် အမက ပစ်ပြီး မယုံလိုက်လို့ ..
နို့မို့ဆို အလိမ်ခံရဦးမယ် ..
ခုလို အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖတ်လိုက်ရလို့
ကျနော်တို့အတွက် ဗဟုသုတလည်း ဖြစ်စေသလို ..
ကြုံလာခဲ့ရရင်လည်း သိပီးသားဆိုဒေါ့ အေးဆေး ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ ..
ဒီအတွက်တော့ ကျေးဇူးပါပဲ အမရေ …
သူတို့ က နိုင်ငံအနှံ့အဖွဲ့ လိုက်ရှိပုံရပါတယ်…
ပါဆယ်ဆားဗစ်ကနေ ဖုန်းခေါ်တာ 007 ကုတ်နံပါတ်နဲ့ 
ပိုထူးဆန်းတာက သူနဲ့ စချက်တဲ့အချိန်ကစပြီး အခုထိအဲ့ဒီ
အရောင်းအ၀ယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိမ်တာလည်း ရှိသေးတယ်။
ကိုယ့်ပစ္စည်းကြော်ငြာထားတဲ့ ဆိုဒ်ကနေ ဆက်သွယ်ပြီး ပစ္စည်းဝယ်ချင်ပါတယ်လို့ ကမ်းလှမ်းတယ်။
စပြောကတည်းက လိမ်မယ့်သူဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အရောင်းအ၀ယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စုံစမ်းမေးမြန်းချက်က အားနည်းနေတာကို သတိထားမိတယ်။ နောက် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့မှ သူတို့နိုင်ငံကို ပထမဆုံး အင်ပို့ထ် လုပ်ဖို့အတွက် မှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုပြီး $ 500 လောက် သွင်းခိုင်းပါလေရော။
အရောင်းအ၀ယ်နဲ့စာရင် မပြောပလောက်ပေမယ့် ကြည့်ရတာ လိမ်ဆင်ကြီးဖြစ်နေလို့ ကုန်အရောင်းအ၀ယ်အတွက် သွင်းမယ့်ကုန်ဖိုးထဲက စိုက်သွင်းခိုင်းလိုက်တော့ ပြန်မလာတော့ဘူး။ [:))]
သြော်…ဒါလည်း အရောင်းအဝယ်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့
ှဗဟုသုတ တစ်ခုတိုးတာဘဲ..မမ ရေ…ကျေးဇူးပါနော်…
အင်တာနက်ကနေ ခင်တဲ့ အသိဘော်ဒါမိတ်ဆွေ ဆိုတာကို
အပြင်သူ့ လက်ရှိဘဝအခြေအနေ ကို မျက်မြင်မတွေ့ ရသေးသရွေ့ 
သိပ်သေချာတာပေါ့ ကိုပေ ရယ်..
အွန်လိုင်း အေးဒမြ လို့ ပြောရမလားမသိဘူးနော်…
ငါးစာပဲ မြင်ပြီး .. ငါးမြှားချိတ်မမြင်တဲ့ မိန်းမမျိုးဆို …… ဒေါ်လှ 700 ပလုံကနဲ နေမှာပဲနော် … ။
မကြုံဖူးတဲ့ အတွေ့ ကြုံဆန်းအကြောင်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ ကြားရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။
လူတွေက လောဘဖုံးသွားလျှင် … အဖြစ်မှန်ကို မမြင်နိုင်ကြတော့ပဲ .. လွယ်လွယ်နဲ့ အလိမ်ခံရတော့တာပါပဲ … ။ ဒေါ်လာ700 ထက် … သုံးရာငါးဆယ်လောက်စတောင်းလျှင်တောင် လိမ်စဉ် အထမြောက်ဖို့ ပိုနီးစပ်မယ်ထင်တယ် … ။
ဆိုရှယ်ဝက်ဖ်ဆိုက်တွေက .. အလိမ်တွေများတာမို့ နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ဖြစ် …ချင့်ယုံဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ် ။
မအိတုံ ပြောသလို ဒေါ်လာ 350 လောက်ကစတာဆိုရင်တော့….
အင်း…Caldle လည်းအလိမ်ခံရ မလားဘဲနော်…
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ချင့်ယုံတာ အကောင်းဆုံး ပေါ့…
အင်း ဒါတွေက အွန်လိုင်းစသုံးသူတွေအတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခု နမူနာယူသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ လိမ်လည်မှုတွေ အဖြစ်များကြပါတယ်။ ယုံတဲ့သူတွေလည်း ယုံကြည်ကြတာ တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ယုံသင့်မှယုံကြည်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ပပဲဖြစ်ဖြစ် လိမ်လည်မှုတွေ အွန်လိုင်းမှာ အဖြစ်များနေတာ လက်တွေ့သင်ခန်းစာကောင်းကောင်းတစ်ခုရရှိသွားတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။
အမ မနောဖြူရေ..
Candle တို့ မြန်မာစကားပုံလိုပေါ့
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သတိထားစရာ လိမ်နည်းများ ဆိုပြီး
Candle လည်းစိတ်ဝင်စားတယ် အမ
လောဘ တက်ပြီးရင် ဒေါသက လာအုံးမယ်..
ပြီးရင် မောဟ တွေနဲ့ စိတ်ညစ်ရတော့မှာပေါ့…ကိုချစ်တီး ရေ…